Oriri ndi mmanu di ezigbo mkpa Shopzụ ahịa ọnụahịa ala | AromaEasy
Oriri ndi mmanu di ezigbo mkpa Na-azụ ahịa na ọnụahịa kachasị mma
Oriri ogwu ndi ana acho osiso. Kpoo ezi uche gị ma hụ uru dị iche iche na-enye ihe na-enye mmadụ ọgwụ. Na ọtụtụ ọrụ na oge ịgba ọsọ. Ndị na-akwa ultrasonic anyị na-abịa n'ụdị dịgasị iche iche dị mma maka ihe ndozi ọ bụla. Chọọ mkpokọta anyị iji chọta onye mgbasa ozi kachasị mma maka gị.
Oriri mmanụ a na-ata ata